Hetsika Jesoa Kristy ho an’I Madagasikara | Hevitra MPANOHARIANA
Hetsika Jesoa Kristy ho an’I Madagasikara
2007-10-09 @ 09:03 in Finoana
Fanamarihana dieny ety amboalohany: Mihazakazaka be ny vaovao ka mila tsy ho araka, tsy maintsy hamoaka azy ireny tsikelikely ihany aho fa aza matahotra isika. Indrindra ny momba an’ilay raharaha domapub izay mafana dia mafana eto an-tanindrazana. Fa misy fandaharana avokoa moa ny zava-drehetra ka aleo aloha taperina ity vary mangatsiaka mbola tsy dia nisy namoaka ity.
Efa dila sahady ny herinandro nefa saika nohadinoina ny momba ilay fihetsiketsehana lehibe nokarakarain’ny Fiangonan’I Jesoa Kristy Eto Madagasikara nampitondraina ny anarana hoe Hetsika Jesoa Kristy ho an’I Madagasikara. Efa an-taonany no nandrenesako ity hetsika ity ary ny fantatro tena nikarakara azy tamin’ny voalohany dia Atoa Rakotobe mpitandrina ao amin’ny Fjkm Zoara Ambohipo Antananarivo. Misy ihany manko izay azo lazaina amin’io hetsika natao tao amin’ny kianjaben’I Mahamasina io.
Ny gazety moa dia nilaza fa io no hetsika lehibe voalohany indrindra nokarakarain’ny Fjkm Nahavoriana olona betsaka sahala amin’iny (sahabo ho 50.000 na mihoatra kely) teto Antananarivo. Ny tadidiko farany namoriana olona betsaka indrindra dia tamin’ny faha-150 taona nahamaritiora an-dRasalama tao amin’ny kianja Betongolo tamin’izany fotoana izany. Ankehitriny moa raha mijery ny kianja izay nisy fiovana betsaka ihany aho dia somary gaga ihany nanao anankampo hoe ity ve moa iny kianja iny? Sady toa nihakely no niharatsy ilay izy.
Tamin’ity indray mitoraka ity dia tsy nitsanga-menatra ny fiangonana raha nahafeno tsara ny kianjaben’I Mahamasina. Fantatra ihany manko ny fahakamoan’ny protestanta raha fivoriana ankalamanjana sahala amin’ireny no atao. Ny andro rahateo tena nety nanaovana akanjo mafana tamin’io fotoana io. Tsy nidanika ny masoandro fa nangatiatsiaka, tahaka ireny efa misy filazana hoe mbola ho kamo amin’izao toetr’andro tena mety izao ihany va ianao? Ny anisan’ny nampiavaka ity hetsika lehibe ity dia ny fanambarana isan-karazany aloha no nalefa voalohany indrindra vao tena niditra tamin’ny litorjia isan-karazany. Nisy fandinihana lalina ny tamin’iny, hoy aho, satria matetika amin’ny fotoana sahala amin’ireny no mampandeha mody ny olona. Ity kosa na dia efa nampiomanina hitondra sakafo maivana aza ny olona dia nalefa mialoha iny fotoana somary mahasavolaina ny maro iny.
Marihina fa nanomboka tamin’ny valo maraina ny fanentanana ka tsy nifarana raha tsy ny hariva tamin’ny dimy ny fotoana. Nisy fotoanan’ny asa sy fampaherezana moa izay iandraiketan’ny mpiandry Fjkm moa ity fotoana ity izay anisan’ny mampiavaka ny protestanta malagasy araka ny fiheverako azy na dia misy aza ny protestanta tsy dia mankasitraka loatra io asan’ny Mpiandry amin’ny fifohazana io, tsy nentin’ny misionera tonga teto manko io zavatra iray io ka izay no mety tsy itiavany loatra azy.
Ny tolakandro indray moa dia rindran-kira nanentanan’ny artista protestanta fanta-daza no niompanan’ny fotoana. Raha io fotsiny no nohenoina sahala amin’ireny hia mihetsiketsika mety niheveran’ny ssany azy hoe hiran’ny sekta no tena betsaka nefa misimisy ihany ny hira mahafinaritra ny sofina ny mandre azy. Na izany aza tsy misorona aho fa milaza ny lesoka ihany koa. Nandritra ny toriteny nataona evanjelistra avy any Afrika izay nilazany ny amin’ny fiangonana misy mariky ny hazo fijaliana aho no tonga saina nanao hoe fa naninona tokoa raha nasiana hazo fijaliana lehibe ity fotoana ity? Angamba efa niomanana ihany ny amin’izany nefa mety ho lafo loatra ny manapaka hazo lehibe, sady manimba ny tontolo iainana amin’ny tsy antony e! rehefa tsy misy avy amin’ny fiangonana efa vonona dia tsy maninona fa ny fivavahana no tena anton-dia ary ny hitory ny filazantsara ihany koa.
PS: tsaroako ho azy indray ilay lahatsoratra nosoratan’I Hery mitondra ny lohateny hoe novonoiko Imioly iny…mba marina mafy! Eiss…ie!